Dhibicda Waqtiga Tirinta - Wadashaqeynta Tucson Pima si loo soo afjaro Guri la'aanta
Waa maxay Point in Time Tirinta?
Tirinta Wakhti-In-Time (PIT) waa tirinta dadka la hoydo iyo kuwa aan gabbaad lahayn ee ay la kulmaan hoyla'aan hal maalin ah Janaayo. Waaxda Guriyeynta iyo Horumarinta Magaalooyinka ee Mareykanka (HUD) waxay u baahan tahay in Joogtada Daryeelka (CoC) ay qabato tiro sanadle ah oo dadka la kulma hoy la'aanta kuwaas oo aan gabaad lahayn, iyo sidoo kale hoy lagu hayo hoyga degdegga ah, guryaha ku meel gaadhka ah, iyo meelo ammaan ah hal habeen. Tirin kasta waa la qorsheeyay, la isku dubariday, waxaana lagu fuliyay gudaha.
Sida CoC ee Degmada Pima, TPCH waxay hogaamisaa tirinta PIT sanad walba, taasoo maxalli ahaan loo yaqaan Qof kastaa wuu xisaabtamayaa!-Degmada Pima Tirada Wadooyinka. Xogta la ururiyay intii lagu jiray Qof kastaa wuu xisaabtamayaa! waxay soo bandhigtaa aragtida dadka hoylaawayaasha ah ee bulshadeena iyo farqiga adeega. Waxay bixisaa sawir ku saabsan sida hoyla'aantu u eg tahay hal habeen oo ka tirsan Degmada Pima.
The 2022 Qof kastaa wuu xisaabtamayaa!—Tirinta Waddada Degmada Pima (PIT) waxaa loo qorsheeyay Janaayo 26, 2022, waxayna ku weydiin doontaa halka xubnaha bulshadayada ee ay haysato hoy la'aanta ay seexdeen habeenkii hore. Bulshooyinka dalka oo dhan ayaa buuxin doona tirintan oo kale inta lagu jiro usbuuca ugu dambeeya ee Jannaayo si ay gacan uga geystaan ​​ogeysiinta fahamka qaran ee hoy la'aanta. Inta lagu jiro tirinta, 300+ ayaa la tababaray Qof kastaa wuu xisaabtamayaa! iskaa wax u qabso iyo shaqaaluhu waxay waraystaan ​​shakhsiyaadka, dhalinyarada iyo qoysaska ay haysato hoy la'aanta iyagoo isticmaalaya sahan elektaroonik ah oo heersare ah oo ka yimid guud ahaan Degmada Pima.
Qof kastaa wuu xisaabtamayaa! Doorarka:
Wareystayaasha-Tabarucayaashu waxay aadi doonaan meel gaar ah oo loo qoondeeyay oo ku taal degmada Pima si ay u waraystaan ​​dadka ay la kulmaan hoy la'aanta meelahaas oo ay ku dhammaystiraan sahannada abka casriga ah. Wareysiyeyaashu waxaa looga baahan doonaa inay ka qaybqaataan tababarka aan tooska ahayn waxayna la shaqayn doonaan mutadawiciinta kale ee hoos imaanaya hagida hogaaminta kooxdooda. Waraysiyadu waxa looga baahan yahay inay si buuxda isaga tallaalaan COVID-19 oo ay xidhaan maaskaro marka ay waraysanayaan dadka bulshada
Hogaamiyaasha Kooxda- Tabarucayaashu waxay hogaamin doonaan koox counters aag ku taal degmada Pima waxayna ka caawin doonaan waraystaha dadaalka ay ugu jiraan inay gaadhaan inta ugu badan ee dadka ay haysato hoy la'aanta intii suurtogal ah. Kahor Maalinta Tirinta Wadooyinka, Hogaamiyaasha Kooxdu waxa ay u baahan doonaan in ay u soo qaadaan sahayda kooxdooda, oo ay u fidiyaan aaggooda oo ay qiimeeyaan baahi kasta oo gaar ah ama caqabadaha iman kara. Hogaamiyaasha Kooxdu waa inay khibrad hore u lahaadaan Tirinta Waddada, yaqaanna aagga metro ee Tucson, diyaar u ahaadaan inay la xiriiraan kooxdooda waxaana looga baahan doonaa inay ka qaybgalaan tababarka farsamada. Hogaamiyaasha Kooxda waxa looga baahan yahay in si buuxda looga tallaalo COVID-19 oo ay xidhaan maaskaro marka ay la falgalayaan kooxdooda oo ay waraysanayaan dadka bulshada dhexdeeda ah.
Orodyahanada Supply- Orodyahanada alaab-qeybiyeyaasha ayaa heegan u ahaan doona si ay ugu qaybiyaan sahayda (tusaale, kaadhadhka hadyada) Hogaamiyaasha Kooxda iyo waraysiyada qaybaha kala duwan ee Degmada Pima iyaga oo wata gaadhigooda gaarka ah subaxda Tirinta Wadooyinka. Orodyahanada sahayda waxay u baahan doonaan inay diyaar noqdaan 7 subaxnimo-11 subaxnimo si ay u qaybiyaan sahayda. Uma baahna inay ka tagaan baabuurkooda si ay hawshan u qabtaan laakiin waxay u baahan doonaan inay helaan aaladda gacanta si ay ula xidhiidhaan Hogamiyayaasha Kooxda iyo Waraysiyada, iyo sidoo kale inay helaan xubnaha kooxdan iyagoo isticmaalaya khariidado farsamaysan. Orodyahanada Sahayda loogama baahna in si buuxda looga tallaalo COVID-19 oo kaliya waxay u baahan doonaan inay xidhaan maaskaro marka ay la falgalaan xubnaha kooxda marka ay bixinayaan sahayda.
Taageerada Maamulka- Taageerada maamulka waxa la heli doonaa dhawr maalmood ka hor tirinta si loogu gudbiyo macluumaadka muhiimka ah tabaruceyaasha ka hor Tirinta Wadooyinka. Taageerada maamulku waxay u baahan doonaan inay galaan mobaylka si ay ula xidhiidhaan Hogamiyayaasha Kooxda iyo Waraysiyada iimaylka, telefoonada iyo fariimaha qoraalka ah. Taageerada maamulka looma baahna in si buuxda looga tallaalo COVID-19 waxayna ka shaqayn doonaan meel fog.
Maxaynu u tirinaynaa?
Sanadkiiba Qof kastaa wuu xisaabtamayaa!—Tirinta Waddada Degmada Pima waxay horumarisaa shaqada beesheenna si looga hortago oo loo dhammeeyo guri la'aanta iyadoo:
Bixinta tiro lagu qiyaasay dadka ay la soo deristay hoy la'aan habeen kasta gudaha Degmada Pima. Qof kastaa wuu xisaabtamayaa! Hadda waa habka ugu wanaagsan ee lagu ogaan karo inta qof ee ku nool hoy la'aanta gobolkayaga; kuwa ku nool hoyga iyo barnaamijyada muddada dheer waxaa si gooni ah u tirinaya barnaamijyadaas.
Bixinta xogta si aan si wanagsan u fahanno cidda bulshadeena ay haysato hoy la'aan iyo waxa adeegyada ka jira nidaamyada bulshada.
Ku hawlgelinta bulshooyinka si ay wax uga bartaan joogitaanka guri la'aanta, iyo dhiirigelinta iskaashiga heer gobol si ay uga shaqeeyaan soo afjarida hoy la'aanta bulshadeena.
Waxay bixisaa saldhig caddayn ah oo lagu codsanayo maalgelinta HUD, maadaama dhammaystirka tirinta PIT ay tahay wax looga baahan yahay dhammaan bulshooyinka hela maalgelinta HUD.
Waxay soo saartaa xogta caadiga ah, la barbar dhigi karo oo laga heli karo dalka oo dhan. Nambarada PIT waxaa u warbixisa HUD Congress-ka, inta badana waxaa lagu sheegaa warbaahinta, waxaana u adeegsada beeshayada qoraalka deeqda iyo qorsheynta beesha. Bulsho, caqiido ku salaysan, iyo dawladaha hoose dhamaantood way isticmaalaan macluumaadkan.
Halkan iska diwaangeli Iskaa wax u qabso
Tababar iskaa wax u qabso ah
Dhammaan mutadawiciinta ayaa looga baahan yahay inay ka qayb qaataan mid ka mid Tababbarka tabaruce inta lagu jiro mid ka mid ah waqtiyada soo socda:
Talaado, Janaayo 18, 2022, laga bilaabo 5:30 galabnimo-7 galabnimo (Sida loo maro Zoom)
Arbacada, Janaayo 19, 2022, laga bilaabo 9:00 subaxnimo-10:30 subaxnimo (Sida loo maro Zoom)
Dalabka tooska ah ee shabakada TPCH (la heli karo Janaayo 19, 2022)
Isku diwaangeli tabaruce
Waxaan u baahanahay caawimadaada! Tabarucayaashu waa qayb muhiim ah oo ka mid ah dhibcaha wakhtiga tirinta. The 2022 Qof kastaa wuu xisaabtamayaa!—Tirinta Waddada Degmada Pima (PIT) ayaa loo qorsheeyay January 26th, 2022. Fadlan buuxi foomka diiwaangelinta iskaa wax u qabso ee hoose: